Maneho Hevitra Momba Ny Vono Olona tao Virginia Tech Ny Tontolon’ny Bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Desambra 2017 3:21 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Aprily taona 2007 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Andro vitsivitsy lasa izay, nitodika tany amin'ny vono olona tao Virginia Tech ny mason'izao tontolo izao; nanamarika ny tontolon'ny bilaogy Maraokana amin'ny fiezahana ataon'ny Fox New amin'ny fampifandraisana ny Islam amin'ilay lehilahy nitam-basy tao Virginia Tech.
Bo18, bilaogera am-pielezana Maraokana, nilaza hoe: “Mety nahatsikaritra izany ianao. Namorona rohy tsy misy dikany teo amin'ny Silamo sy tifitra variraraka ny Fox News.”
Ny Fox News, ao amin'ny lahatsoratra voalaza etsy etsy aloha, dia milaza fa “nanakona ny teny hoe” ISMAIL AX “tao anatin'ny sandriny iray i [Cho Seung-Hui], izay mety ho filazana ny tantara Islamika momba ny sorona nataon'i Abrahama voalaza anaty baiboly.”
Tezitra ireo bilaogera sasany fa tsy nisy ny fifantohana tamin'ny fanampiana ireo fianakaviana niharam-boina sy ny oniversite mba handroso. Milaza i Myrtus ao amin'ny bilaoginy hoe, “… afaka mifantoka amin'ny fizotran'ny fanasitranana ve isika azafady?” Hoy izy avy eo: “Tsy misy dikany ireo tombatombana ratsy rehetra sy ny fanomezana tsiny ho an'ireo tompon'andraikitry ny anjerimanontolo, ho an'i Amerika, ho an'ny polisy, ary lasa lavitra hatrany amin'ny fampifandraisana ny vono olona amin'ny Silamo raha hilaza ny kely indrindra!.”
Tsy gaga tamin'ny zava-nitranga ity ny bilaogera hafa antsoina hoe Eatbees, nilaza izy fa “Tsy mahagaga ahy intsony ireo mpamono olona any Amerika, satria zava-misy ara-kolontsaina mipoitra hatrany. Tsy misy afaka mandà fa manana kolontsain'ny herisetra isika, manana tanana mihoso-drà amin'ireo mpivahiny masina nankany Fallujah. “
Mamintina azy tsara ilay bilaogera Laila Lalami : “Mitady antony tsy misy dikany tamin'ny fihetsik'i Cho ny olona, raha ny fanazavana tsotra – mandra-pahazavan'ny hetsika mahatsiravina toy izany – izay voalaza fa tovolahy marary saina i Cho, ka tokony tsy nahazo basy mihitsy. “